नेपाल टेलिकमको तिहार छठको अवसरमा ग्राहकलाई विशेष प्याकेज अफर - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
नेपाल टेलिकमको तिहार छठको अवसरमा ग्राहकलाई विशेष प्याकेज अफर
२०७७ कार्तिक, २६ बुधवार
काठमाडौं / नेपालीहरुको महान पर्व तिहार, छठ तथा नेपाल संवतको नयाँ वर्ष (न्हु दया)का अवसरमा आफन्त र शुभचिन्तकहरुलाई शुभकामना सन्देश ९क्ःक्० पठाउन सहज होस् भनी नेपाल टेलिकमले एसएमएस प्याकका साथै विभिन्न प्रकारका प्याकहरु उपलब्ध गराइरहेको छ ।
सामान्य अवस्थामा एउटा एसएमएस पठाउँदा ५० पैसा शुल्क लाग्ने गरेको छ । हाल नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेको अटम अफर ९ब्गतगmल इााभच० अन्तर्गतको एसएमएस प्याकमा तीन प्रकारका सहुलियत उपलब्ध छन्ः– रु. ५ मा २० वटा एसएमएस, रु. १५ मा ७० वटा एसएमएस र रु. ६० मा ३०० वटा एसएमएस । यी प्याक क्रमशः १ दिन, ७ दिन र २८ दिनको समयावधिभित्र प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
२० वटा एसएमएसका लागि क्ःक्द्दण्, ७० वटा एसएमएसका लागि क्ःक्ठण् र ३०० वटा एसएमएसका लागि क्ःक्घण्ण् लेखेर १४१५ मा एसएमएस पठाउन सकिन्छ । यसैगरी ८ज्ञद्धज्ञछ८ज्ञ८छ३ डायल गरेर वा ल्त् ब्एए बाट पनि एसएमएस सेवा खरिद गर्न सकिन्छ ।
पोस्टपेड प्राइम प्याक लिई २ सयवटा एसएमएस, प्रिमियम प्याक खरिद गर्दा ५ सय वटा एसएमएस र गोल्ड तथा डायमन्ड प्याक खरिद गर्दा १ हजार वटा एसएमएस पठाउन सकिने सुविधा उपलब्ध छ । यी एसएमएस एक महिनासम्म कुनैपनि समयमा पठाउन सकिन्छ । पोस्टपेड प्याक खरिद सम्बन्धी विस्तृत जानकारी लिनका लागि आफ्नो मोबाइलमार्फत ८ज्ञद्धज्ञछ८द्द३ डायल गर्न सकिन्छ ।
यी विभिन्न प्याकका बारे कम्पनीको ‘नेपाल टेलिकम एप’ बाट जानकारी लिन तथा सेवा खरिद गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी कम्पनीको वेबसाइट धधध।लतअ।लभत।लउ मार्फत यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । वेबसाइटमा रहेको सेल्फ केयर एकाउन्टमा रजिष्टर गरेर त्यसबाट पनि विभिन्न प्याक खरिद गर्न सकिन्छ ।
नोकिया ३.४- ट्रिपल क्यामेराको साथ एआई इमेजिंग फिचर्स
टेलिकमको अटम अफर : डाटा प्याकमा थप सुविधासहित ल्यायो यस्तो सेवा
टेलिकमले ल्यायो तिहार, नयाँ वर्ष र छठ लगायतका पर्वहरुको अवसरमा छुट र अफर, नयाँ प्याकेज केके छन् ?
दैलेखमा टेलिकमको टेलिफोन तथा इन्टरनेट नेटवर्क अप्टिकल फाइबरबाट विस्थापित
ओपोद्वारा मोबाइल फोनमा नयाँ पोजिसनिङ फङसन, हाई प्रसेजन पोजिसनिङ अल्गोरिथम सार्वजनिक
प्रविधिका क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने चीनको पञ्चवर्षीय महत्वाकाँक्षी योजना, अमेरिकी रणनीतिलाई कडा धक्का !